China Natural beeswax votive labozia orinasa sy ny mpamatsy |Seawell
Labozia votive savoka voajanahary
Item: labozia votive savoka
Fitaovana: 100% savoka tantely
Habe: 45*50 mm
Fonosana: 4pcs / boaty, manaiky ny fanao
Item: savokalabozia votives
izanylabozia votivedia vita amin'ny savoka 100% madio, voajanahary ny akora, ka rehefa mirehitra ao an-tranonao ianao dia fiarovana ho an'ny fahasalamanao.Miara-miasa amin'ny toeram-piompiana tantely any Chine izahay, savoka loharano tokana ihany no ampiasainay, mampiasa savoka voajanahary madio, noho izany fa ny labozia dia manana hanitra voajanahary mamy, toy ny tantely ary loko mavo tsara tarehy.
Atao tanana amim-pitandremana - arotsakay amin'ny ampahany kely ny labozia tsirairay mba hahazoana antoka ny kalitao avo indrindra.Ny savaivony sy ny haavon'ny labozia dia mety ho kely kokoa noho ilay habe voatanisa satria mangatsiaka ho azy ny labozia ao anaty lasitra labozia.Ny savoka mampangatsiatsiaka dia alaina avy ao amin'ny lasitra ka ny labozia tsirairay dia kely kely kokoa noho ny lasitra, izay manampy anao koa hanome anao labozia tsy misy fitafy.
Tsy misy poizina sy mahasalama Manolo-tena hamorona vokatra mahasoa ho an'ny olombelona sy ny tany izahay!Ny labozia maniry savoka tsirairay dia vita amin'ny landihazo, izay miavaka amin'ny firafitry ny kofehy taratasy ary tsy misy metaly mavesatra na zavatra simika misy poizina.
Mety amin'ny fotoana rehetra-ny olona toy ny efitrano misy labozia, ny labozianay no tena ilainao hamoronana toerana mahafinaritra.Ny laboziantsika dia tsy ilaina fotsiny mba hamoronana atmosfera, fa azo ampiasaina amin'ny fahatapahan-jiro, tena mety amin'ny fanomezana ho an'ny namana sy ny fianakaviana, mety amin'ny lanonana sy ny vavaka.
Ny ekipanay dia manolo-tena amin'ny fanomezana serivisy sy fanohanana mpanjifa kalitao avo indrindra.Ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa no laharam-pahamehanay!Faly foana izahay manampy ny mpanjifa amin'ny fotoana famaliana haingana sy ny antoka kalitao.Mankasitraka ny valin-teninao izahay ary mamporisika anao hifandray aminay!
Fidio izahay ary safidio ny fahasalamana sy ny fiainana sambatra, satria manome savoka tsara kalitao sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay.Manantena izahay fa hanome ny tsara indrindralabozia savokaho anao!
teo aloha: Labozia miloko miloko mareva-doko mihaja mirefy
Manaraka: savoka andry miendrika labozia votive ao anaty siny plastika
4 mirefy avo 100% labozia savoka voajanahary
Famatsiana labozia tsingerintaona nahaterahana ho an'ny mofomamy de...
loko avana savoka fitsingerenan'ny andro nahaterahana Stick labozia cus...
labozia manify, Varotra labozia, Labozia tavoahangy vera, Andry labozia, Labozia andry manitra, Labozia paraffin Wax Taper,